Blog of Nyein Chan Yar: Student Union song
This is the student union song we sang during 8888 demostrations.
သက်စွန့်ကျိုးပမ်း ထမ်းရွက်ခဲ့ပေသည်။ .
Posted by dathana at Sunday, September 16, 2007
Labels: lyrics, Myanmar
မေ September 16, 2007 5:15 PM
Do you hv this song ?
dathana September 17, 2007 12:08 AM
မရှိဘူး။ အဲဒီတုန်းက သီးချင်းစာသား ဝေပေးတယ်။ ပြီးတော့ ဆိုလိုက်ကြတာပဲ။ ဆိုရတာ လွယ်တယ်လေ။ ဆိုကြည့်ပါလား။ ကဗျာလိုမျိုး ဆိုတော့ သံစဉ်က သူ့ဟာသူဖြစ်သွားတာပဲ။